Beyoncé iyo Afrika, oo ah qaabka weyn ee loo yaqaan 'superstar': dibad-baxa Maraykanku wuxuu dib u eegayaa kobcintiisa, muuqaal ka mid ah filimka Senegalese "Touki Bouki" oo aan ka soo xigan ilaha, ama samaynta jilbaha dhinaca midigta ... Haddii uu hantidiisa dhaqaale Afrikaanka ah ka badan yahay, farshaxanku waa mid aan waxba tareynin muuqaalka qaaradda
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 31, 2018 00: 30 No Comments
Waa in la qirsan yahay in sawirku qurux yahay. Beyoncé et Jay-Z fuulitaanka baaskiilad weyn, dharka dhagaxa dhagaxa ah ee ku yaala qashinka. Waxay u jeedaan dhinaca hore, kuwa guulaysta. Waa muuqaalkan, oo lagu sii daayay shabakadaha bulshada 12 March March 2018, oo loo doortay inay ku dhawaaqdo socdaalka adduunka ee soo socda. Marka laga reebo, kala firidhsan iyada oo aan wax faahfaahin dheeraad ah lahayn, ma qaadan waqti dheer si loo barbardhigo taxanaha filimka 1973, Touki Bouki, oo ka socda filimka Senegalese Djibril Diop Mambéty.
A masterpiece horay uga fog adduunka billionaires hip-hop, maxaa yeelay waa sheeko laba dhalinyaro ah Dakarese penniless, adhijir iyo arday, isku dayaya in ay ka cararaan dalkooda .
Mid ayaa soo dhaweyn kara "abaalmarintan" si ay u noqoto filimka Senegalese, oo sheega, in aan la socon cidda caawisa, waxay fududeyn doontaa calaamadda si ay ula kulanto dhagaystayaasha cusub. Laakiin deynta, oo aan fiicnayn, waxay kordhisaa su'aalaha kale. Marka hore, sababtoo ah xuquuqda Agaasimaha, wiilkiisa Teemour Diop Mambéty, weligiis lagama tashan kahor soo-kabashadaan, sida uu qariyey weriye Elisabeth Franck-Dumas (siidaynta 12 Maarso 2018).
Sep28 06: 33